साइन गरीसकेको शाहरुखसंगको फिल्मलाई एकाएक किन छाडिन् दीपिका पादुकोणले ? – Complete Nepali News Portal
साइन गरीसकेको शाहरुखसंगको फिल्मलाई एकाएक किन छाडिन् दीपिका पादुकोणले ?
April 12, 2017	3,727 Views Share
एजेन्सी- पछिल्लो समयकी बलिउडकी चर्चित नायिका दिपिका पादुकोणले शाहरुख खानको फिल्ममा काम नर्गने भएकी छिन् । भारतिय मिडियाका अनुसार उनले शाहरुख खानसंग तय भएको फिल्ममा साइन गरीसकेकी भएपनि उनले काम नर्गने भएको बताइएको छ ।
निर्देशक आनन्द एल रायको फिल्ममा शाहरुख एक बामपुड्केको भुमिकामा अभिनय गर्नेवाला थिए। दिपिको कस्तो भूमिका रहको छ सार्वजनिक हुनुअघि नै फिल्म छोडेको खबर बाहिरीएको छ ।
उनी अत्यन्तै व्यस्त भएका कारणले फिल्म छाडेको बताइएको छ ।जयपुरमा भन्सालीसंग सुटिङ सेटमा कुटपिट पश्चात ‘पद्यावती’को सुटिङ मिति सारिएको थियो। यसकारण पनि उनले फिल्म छाडेको बताइएको छ ।